Madaxweyne Deni oo Baarlamaanka ka baxay isagoo “xanaaqsan” kaddib markii Su’aallo la weydiiyay – Kalfadhi
Madaxweynaha Maamulka Puntland Saciid Cabdulllahi Deni, ayaa maanta si rasm ah u daah-furay Kalfadhiga 45aad Golaha Wakiilada Puntland.
Kaddib Khudbada furitaanka Madaxweynaha Puntland ayaa Xildhibaanno ka tirsan Golaha Wakiiladda ay bilaabeen in ay weydiiyaan su’aallo balse Madaxwenaha ayaa si carra-leh uga baxay fadhiga furitaanka maanta.
Su’aasha uu ka carrooday Madaxweynaha waxaa weydiiyay xildhibaan lagu magacaabo Cawil Daad, waxaana su’aasha ay ka hadleysay qeyb-kamid ah amniga iyo waxa dowladda Deni ay qabtaya muddadii ay xilka heysay?
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka jawaabay su’aasha wuxuuna yiri: “Xaqiiqda marka loo hadlo, dadka dalka xogtiisa haya ma ahan Baarlamaanka oo keli ah. Dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer Puntland oo dhan”.
Madaxweyne Deni, ayaa si carra-leh uga jawaabay su’aasha isaga oo xildhibaanku weydiiyay in uu caddeymo la yimaado. Mr Deni ayaa sheegay in amniga magaalada Boosaaso aad loo adkeeyay iyo meelaha kale ee amni darrada ay ka jirtay.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Saciid Cabdulllahi Deni, ayaa si carra-leh u yiri in 99 boqolkiiba dhulka Gobolka Sanaag uu soo galay gacanta maamulka Puntland intii uu halka hayay, sida uu halka u dhigay.
Fadhigii maanta, ayaa waxaa hareeyay buuq iyo sawaxan, waxaana guddoomiyaha golaha wakiiladda ii isku dayay in uu xakameeyay kulanka.